एलिना चौहान र प्रशान्त पौडेलको स्वरमा ‘लाहुरे हरायो’ गीत सार्वजनिक(भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचारएलिना चौहान र प्रशान्त पौडेलको स्वरमा ‘लाहुरे हरायो’ गीत सार्वजनिक(भिडियो हेर्नुहोस्)
November 27, 2020 admin समाचार 5988
एलिना चौहान र प्रशान्त पौडेलको स्व’रमा रहेको लाहुरे हरयो गीतको म्युजिक भिडियो सार्व’जनिक भएको छ । एबीएस म्युजिकले बजारमा ल्याए’को गीतमा प्रान्त पौडेलकै शब्द तथा संगी’त रहेको छ । अनिल कुमार मानान्धरले नि’र्देशन गरेको म्युजिक भिडियोलाई बिदुर आपा’गाँईले नि’मार्ण गरेको हो ।
एलिना र प्रशान्तकै अभि’नय रहेको म्युजिक भिडियो’लाई श्याम कुवरले सम्पा’दन गरेको हो । आशिस भाइले खि’चेको म्युजिक भिडियोको पोष्ट प्रोड’क्सनमा तुल्सी फिल्मस रहेको छ । काठमाडौं- एलिना चौहान र प्रशान्त पौडेलको स्वरमा रहेको लाहुरे हरयो गीतको म्यु’जिक भिडियो सार्व’जनिक भएको छ । एबीएस म्युजिकले बजा’रमा ल्याएको गीतमा प्रान्त पौडेलकै शब्द तथा सं’गीत रहेको छ ।
अनिल कुमार मानान्धरले नि’र्देशन गरेको म्युजिक भिडियोलाई बिदुर आपागाँईले नि’मार्ण गरेको हो । एलिना र प्रशान्तकै अ’भिनय रहेको म्युजिक भिडियोलाई श्याम कुवरले सम्पा’दन गरेको हो । आशिस भाइले खिचेको म्युजिक भिडियोको पोष्ट प्रो’डक्सनमा तुल्सी फि’ल्मस रहेको छ ।Osnepal बाट
व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने ? जान्नुहोस्
March 25, 2021 admin समाचार 2848
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर (विवरण सहित)
March 21, 2021 admin समाचार 3122
नेपाल राष्ट्र बैंकले आ’इतवार का लागि नेपाली बजारमा विभिन्न मुद्राको भाउ सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको वि’निमय दर अनुसार एक अमेरि’की डलरको खरिददर ११५ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ११६ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको
किन भयो विप्लव र रेखा थापाबीच भेट ?
March 8, 2021 admin समाचार 3306
नेपाली फिल्मकी चर्चित अ’भिनेत्री रेखा थापाले नेकपा महासचिव नेत्र’विक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग भेट गरेकी छन् । उनले समाजिक संजाल फेसबुकमा भेटको एक तस्विर सा’र्वजनिक गर्दै भेटको बारेमा जानकारी दिएकी हुन् । केही दिन अगाडि सरकार’सँग वार्ता
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (215842)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (207627)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (207283)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (206152)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (204967)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (204173)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (202435)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (202303)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (171377)